बिहान खाली पेटमा नखानुस् यस्ता ६ खानेकुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
बिहान खाली पेटमा नखानुस् यस्ता ६ खानेकुराहरु !!
दहीले खाना पचाउन मद्दत गर्छ । तर यसमा पाइने ल्याक्टिक एसिड नामक ब्याक्टेरियाले बिहान खाली पेटमा उच्च अम्लीय सामाग्री पैदा गर्छ । त्यसैले दही बिहान खाली पेटमा भन्दा दिउँसो खाँदा राम्रो मानिन्छ । (ratopati.com बाट सभार)